ဆုံဆည်းရာ: မေရနံ့ ၊ သီချင်းတပုဒ်နှင့် နိုင်သူ အကုန်လုံးယူ
မေရနံ့ ၊ သီချင်းတပုဒ်နှင့် နိုင်သူ အကုန်လုံးယူ
၁၉၇၉- ၈၀ ခုနှစ်က ရှမ်းပြည်နယ် ကလောမြို့မှာရှိတဲ့သည့် အစိုးရ စက်မှုသိပ္ပံကျောင်း ကို တက်ရောက်ခွင့် ရခဲ့သည်။ ရန်ကုန်ကိုပင် တခေါက်၊ နှစ်ခေါက်သာ ရောက်ဖူးသည့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် တောမြို့သားသည် ကလောတွင် ကျောင်းတက်ရမည် ဆိုတော့ မိခင်က ခွင့် မပြုချင်။ သို့သော် သူ့သားအား တလလျှင် ၃၅၀ ကျပ်ခန့် ကုန်ကျ မည့် ဒေသကောလိပ်သို့ ပို့ဆောင်ခြင်းငှာ ဘယ်လိုမှ မစွမ်းနိုင်ခဲ့လေတော့ သွားပေါ့ သားရယ် ဟုသာ သက်ပြင်းမောဖြင့် ပြောနိုင်ရှာခဲ့သည်။
ရန်ကုန်သို့ ရောက်သည်။ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူက ပေါ်ဦးပေါ်စ ဗွီဒီယိုတွေကို လိုက်ပြ သည်။ အိမ်တအိမ်က ပြနေလျင် အိမ်ရှေ့ပလက်ဖေါင်းတွင် ရပ်ကြည့်နေသူတွေ အများကြီး။ အော် ဗွီဒီယိုဆိုတာ ဒါပါလား။ မဟာ ဗန္ဓုလလမ်း၊ အနော်ရထာလမ်း၊ ကမ်းနား လမ်းရှိ တရုတ်လူမျိုး အိမ်အချို့က ဗွီဒီယိုကို တံခါးဖွင့်ကာ လမ်းမဘက်လှည့်ပြီး ပြပေးသည်။ လမ်းသွားလမ်းလာ ကျနော်တို့က ရပ်ကြည့်ရသည်။ မောရမှန်းမသိ၊ ပင်ပန်း ရမှန်းမသိ။ အဆန်းတကျယ် ပါလား။
ဗွီဒီယိုများမှ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကို ကြည့်ရသည်။ ဘီးဂျီး တေးဂီတ အဖွဲ့ကို ကြည့် ရသည်။ ဘော်နီ အမ် ( Boney M ) (နောင်တွင် လေယာဉ်ပျက်ကျ တဖွဲ့လုံး သေဆုံး) ကို ကြည့်ခွင့်ရသည်။ ဘီတယ်လ်၊ အီးဂဲ စုံလို့ပင် ကြည့်ရသည်။ တယောက် နှစ်ကျပ် ပေးရသည်။ သို့ဖြင့် အက်ဘာ (ABBA) တေးဂီတ အဖွဲ့ကို ကြည့်ခွင့် ရခဲ့ပါသည်။
အက်ဘာသည် ဆွီဒင်နိုင်ငံမှ ဆွီဒစ်လူမျိုးများ ဖြစ်ကြသည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ် ဆွီဒင်နိုင် ငံ၊ စတော့(က) ဟုန်း ( Stockholm) မြို့တွင် စတင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင် ခဲ့သည်။ တီးဝိုင်း ၏ အမာခံ လေးယောက်ကား လင်မယားစုံတွဲ နှစ်တွဲပင်ဖြစ်သည်။ ဘန်နီ ( Benny Andersson ) နှင့် အန်နီ ( Anni-Frid “Frida” Lyngstad) တို့က တတွဲ၊ ဘီဂျန် ( Bjorn Ulvaeus) နှင့် အဂ္ဂနီသာ ( Agenetha Faltskog) တို့က တတွဲ ဖြစ်သည်။ ဘင်နီက ကီးဘုတ်တီး၊ သီချင်းရေးသည်။ ဘီဂျန်က ဂစ်တာတီးသည်။ အင်နီနှင့် အဂ္ဂနီသာ တို့က ပင်တိုင် အဆိုရှင်များ ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့၏ အောင်မြင်မှုကား တေးဂီတ သမိုင်းတွင် စတုတ္ထမြောက် အရောင်းရဆုံး တေးဂီတ၀ိုင်းအဖြစ် ရပ်တည် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သည်။ ဓါတ်ပြား အယ်လ်ဘမ်များ တကမ္ဘာလုံးသို့ သန်းချီ ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။
သူတို့၏ ကမ္ဘာကျော်တေးသီချင်းများကို ကော်ပီသီချင်းလုပ်ကာ ဗမာပြည်တွင် “မေဆွိ” ဖြစ်လာခဲ့သည်။ “အယ်ခွန်းရီ” (ယခု နာမည်ကြီးနေသော အယ်ဇိုင်းစီ၊ အယ်ခွန်းဝါ တို့၏ အဒေါ်ဖြစ်သူ) ဖြစ်လာသည်။ ထိုစဉ်က နာမည်ကြီးခဲ့သော “အမြန်ယာဉ်၊ လေယာဉ်ပျံ သီချင်းတို့သည်ကား အက်ဘာ၏ ကမ္ဘာကျော် တေးသီချင်းများကို မြန်မာ စာသားသွပ် ကော်ပီလုပ် ဆိုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတွင် အက်ဘာ တေးဂီတ၀ိုင်းသည် အကောင်းဆုံး သံစဉ်သီချင်းများ ဖန်တီးနိုင်သည့် အဖွဲ့ဟု ဂီတသမိုင်း ၀င်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၃ လောက်တွင် အက်ဘာအဖွဲ့ ပြိုကွဲသွားခဲ့ပါသည်။
နှစ်တွေ ကြာခဲ့ပြီ။ ကလောတွင် ကျောင်းသုံးနှစ်တက်ပြီးသောအခါ ချယ်ရီ၊ စိန်ပန်းပြာနှင့် ထင်းရူးတောကို စွန့်ခွာခဲ့ရသည်။ ထားဝယ် ဟိန္ဒားသတ္ထုတွင်းတွင် အဆုပ်နာ (သံသယ) ဖြစ်သည်အထိ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ခဲ့သည်။ ဆေးထိုးဖို့ကို အချိန်ပို ဆင်းရသည်။ ယူနီဆက် က ပေးလှူနေသော အဆုပ်နာပျောက်ဆေး ( Strep ထိုးဆေးများ) သည် လမ်းခုလတ်တွင် ပျောက်ဆုံးနေခဲ့သည်။ မန်နေဂျာ အပါအ၀င် အရာရှိကြီးများအတွက် အားဆေးအမျိုးမျိုးသည်ကား ဆေးရုံတွင် အသင့်၊ အလျံပါယ်။ အဆုပ်နာ ထိုးဆေးကို ၀ယ် မထိုးနိုင်သဖြင့် အိပ်ယာပေါ်ကနေ သေနေ့ကို စောင့်နေသော အညတရ မိုင်းအလုပ်သမား များ။ ၁၉၈၈ ဂျွန် ၂၁ ရက်နေ့၊ သတက-၂ (ရန်ကင်း) တွင် ငွေသုံးထောင် လျော်ကြေး ပေးကာ အလုပ်မှ တရားဝင်ထွက်လိုက်သည်။ အမေက သူ့ အိုစာ၊ မင်းစာ လက်ကောက် ကလေး ရောင်းကာပေးသည်။ ထိုနေ့သည်ကား ကမ္ဘာကျော် ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံကြီး၏ အကြိုတိုက်ပွဲ ဂျွန်- ၂၁ အရေးအခင်း ဖြစ်သည့်နေ့ပင် ဖြစ်နေသည်။
၈၈ အရေးတော်ပုံ၊ လူ့ဘောင်သစ်၊ နရသိမ် အကျဉ်းထောင်၊ မျိုးချစ်ဒီမိုကရက်တစ် လူငယ်တပ်ပေါင်းစု (တော်လှန်သော လူ့ဘောင်သစ်) မှသည် လက်ရှိ ဘ၀သို့။
ကလော ကျောင်းမှာတုန်းက ဆရာ တယောက်ပြောလိုက်သည့် စကားကို အမှတ် ရလာသည်။ ကိုယ်ကလည်း အဲဒီသီချင်းကို ကြိုက်သည်။ အက်ဘာ(ABBA)၏ အောင်နိုင်သူသာ အကုန်ယူသွားတယ် (The Winner Takes It All) ဖြစ်သည်။ အပေါ်ယံ လျှပ်ခံစားလျင် အချစ် အသည်းကွဲသီချင်း ဖြစ်သည်။ အသေအချာ ခံစားမည်ဆိုလျင် ဘ၀ထိုထို၏ အဘိဓမ္မာတွေ ပါနေသည်ဟု ခံစားရသည် ….
ငါတို့ ကျော်လွန်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေကို
ဘာတခုမျှ ပြောချင်၊ ဆိုချင် စိတ် မရှိတော့ပါဘူး။
ခုဆို ဒါဟာ သမိုင်း ဖြစ်ခဲ့ပြီ။
ငါ့မှာ ရှိသမျှ အခွင့်အလမ်းတွေ အားလုံးကို
မင်းလည်း ဒီလိုပဲ ကစားခဲ့တယ်လေ၊
ကစားဖို့ အရန်ဝှက်ဖဲလည်း မရှိတော့ဘူး။
အောင်မြင်မှုရဲ့ နဘေးမှာ ရှုံးတဲ့သူက
ဒါ… သူမရဲ့ ကံကြမ္မာပဲ။
ငါ့ကို စည်းရိုးတခု တည်ဆောက်ပေးခဲ့…
ငါ့ကို သိုက်မြုံတခု တည်ဆောက်ပေးခဲ့…
ဒါဟာ ငါ့ရဲ့ ရူးသွပ်မှုသာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ၊
အံစာတုံး တတုံးကို လှိမ့်ကာ လှိမ့်ကာ ကစားနေတယ်
သူတို့ရဲ့ စိတ်အာရုံဟာ အေးစက် ရေခဲတုံးသဖွယ်။
နိုင်သူကသာ အားလုံးကို သဲ့ယူနေတယ်။
ဒါဟာ အင်မတန် ရိုးရှင်းပါတယ်…
ငါ့ဘက်က ဘာကြောင့် စောဒက တက်ရနေရမှာလဲ။
ဒါပေမဲ့ ငါ့ကို ပြောပြစမ်းပါ၊
သူမဟာ မင့်ကို ငါနမ်းသလိုမျိုး နမ်းပါရဲ့လား…
သူမက သင့်အမည်နာမကို ခေါ်တဲ့အခါ
ခံစားမှုဟာ မင်းရင်ထဲမှာ ထပ်တူဖြစ်ပါရဲ့လား။
စည်းမျဉ်း ဥပဒေသတွေကို ငါလိုက်နာနေရတယ်။
ကစားပွဲဟာ တဖန် ပြန်လာဦးမှာပါ၊
ငါ့ကို ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတိုင်း လိုက်နာစေရမယ်ပေါ့။
ချစ်သူတယောက် (သို့) သူငယ်ချင်းတယောက် အဖြစ်နဲ့လား…
ကြီးမြတ်သူတယောက် (သို့) သိမ်ငယ်သူတယောက် အနေနဲ့လား…
နိုင်သူကတော့ အားလုံးကို သဲ့ယူမှာနော်…။
ဘာမျှ ပြောချင်၊ ဆိုချင်စိတ် မရှိတော့ပါဘူး။
မင်းငါ့လက်ကို ဆွဲကိုင်လှုပ်ရမ်း နှုတ်ဆက်ခဲ့တာကို
ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက်စေခဲ့တယ် ဆိုရင် …
အလွန့်ကို စိတ်တင်းကျပ်နေတဲ့ ငါ့ကို၊
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုတွေ မရှိတော့တဲ့ ငါ့ကို
ဒါပေမဲ့ မင်းမြင်မှာပါ …
နိုင်တဲ့သူဟာ အားလုံးကို သဲ့ယူနေမှာ …. ။
ယူကျု ( you tube) ကျေးဇူးနဲ့ ထပ်ကြည့် ခံစားခွင့်ကို ရနေပါတယ်။ သစ္စာဖေါက် သွားတဲ့ ချစ်သူအတွက် ကြေကြေကွဲကွဲ ခံစားရတယ် မိန်းကလေးအဖြစ် အဂ္ဂနီသာက ခံစားသီဖွဲ့ပါတယ်။ ဂျူးလိယက်ဆီဇာကို လွှတ်တော်ထဲမှာ အသေလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သူထဲ သူ ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးလူ ဗလူးတပ်စ် ပါလာတော့ ဂျူးလိယက်ဆီဇာက “သြော် ဗလူးတပ်စ် … မင်းလည်းပါသကိုး” ( Oh! Brutus you too … ) ဆိုကာ သေဆုံးသွားခဲ့ သည်။
သီချင်းက အချစ်အကြောင်းကိုလည်း ပြောသည်။ သစ္စာဖေါက် ခံရခြင်းကိုလည်း ပြသည်။ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး လူ့အဖွဲ့ အစည်း၏ ခံစားမှု အထွေထွေကို ပြောနေသည်။ ဘ၀ သည် ကစားပွဲတခုဟု ဆိုလျင် ထိုကစားပွဲတွင် နိုင်သူ ရှိသလို ရှုံးသူလည်း ရှိမည်။ စည်းမျဉ်းတွေ အတိုင်း ကစားရသူသည် ကျင့်ဝတ်ကို အတော့်ကို ထိမ်းရသည်။ စိတ်ခံစား မှု၊ ဆန္ဒစွဲတို့ကိုလည်း ထိန်းချုပ်သန့်စင်ရသည်။ ကစားပွဲ၏ တရားမှု၊ မတရားမှုကလည်း ပါးပါးကလေးပင် ဖြစ်သည်။ သို့သော် အမှန်တရားကို ယုံကြည်သော၊ အမှန်တရား ဘက်က သတ္တိရှိရှိရပ်သော ကျင့်ဝတ်ကောင်းသည့် ကစားသမားသည် ရှုံးရလျင်လည်း ယာယီပင်ဖြစ်သည်။
“ကစားပွဲဟာ တဖန်ပြန်လာဦးမှာ ( The game is on again)”
မှန်ပါသည်။ ကစားပွဲဟာ ပြန်လာဦးမှာဖြစ်သည်။ တရားမှုနှင့် မတရားမှုတို့၏ ကစားပွဲသည် တရားမျှတမှု မနိုင်မချင်း ကစားပွဲဟာ အသေအချာကို ပြန်လာဦးမှာ ဖြစ်သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်သော ဗမာပြည် လွှတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုက ဒါကို ပြနေသည်။
“ပွဲကြည့် ပရိသတ်ဆိုတာက အမြဲတန်း စင်အောက်မှာသာ ( spectators of show, always staying low )
ချက်နိုင်ငံ သူရဲကောင်းကြီး ဂျူးလိယက် ဖူးချစ်က “ဘ၀မှာ ပွဲကြည့်သူ မရှိ” ဟုဆို ခဲ့သည်။ မှန်ပါသည်။ ဘ၀မှာ အဘယ်သူသည် ပွဲကြည့်သူ ဖြစ်နိုင်ပါမည်နည်း။ သို့သော် ကြားနေလိုလို၊ ဘာလိုလို၊ ညာလိုလိုနှင့် နိုင်ငံရေး လေထုတွင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပရိသတ် နေရာယူထားသူများ ရှိသည်။ အကြင်သူသည် အမြဲတန်း စင်အောက်တွင်သာ နေရမည် ဖြစ်သည်။ သဏ္ဌာန်အရ စင်ပေါ်တက်ထိုင်ခွင့်ကို ခေတ်ပျက်တွင် ရနေနိုင်သော်ငြား အနှစ် သာရ ရှိရှိ သမိုင်းတွင် သူသည် ထာဝရ စင်အောက်တွင်သာ။ လိပ်ပြာငယ်လျက်၊ နိမ့်ကျလျက် သာရှိမည်။ ကစားပွဲတွေကား အသေအချာကို ပြန်လာဦးမည် ဖြစ်သည်။ ။
စာကိုး။ ။ http://en.wikipedia.org/wiki/ABBA
သီချင်းကိုး။ ။ http://www.youtube.com/watch?v=jC8f8jrNas4&feature=related
၀န်ခံချက်။ ။ မူရင်းသီချင်းကို ခံစားဗမာမှုပြုရာတွင် အားနည်းချက်များရှိနိုင်ပါသည်။ အတတ်နိုင်ဆုံး မူရင်းသီချင်း၏ ဆိုလိုရင်း မပျက်အောင် ကြိုးစားခံစားမှု ပြုခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
Mg Calu said...
ဘာတွေရေးလို့ ဘာကိုပြောချင်မှန်းမသိ သူပုန်ပီပီ ရင် ထဲကခံစားချက်တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရေးစမ်း ၊ ပြောစမ်းပါဗျာ။